CC Shakuur "Aad ayaa loo bah-dilay reer K/Galbeed" - Caasimada Online
Home Warar CC Shakuur “Aad ayaa loo bah-dilay reer K/Galbeed”
Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasi C/raxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa dulmi iyo bah-dilaad lagula kacay Koonfur Galbeed ku tilmaamay xariga Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Isaga oo ka hadlaya dhibaatooyinka deegaanada Koofur Galbeed ayuu sheegay in siyaasiyiinta Reer Koofur Galbeed ay sanad gudahiis dhibaatooyin dhowr ah kala kulmeen dowladda Soomaaliya.
“Waxa maanta Baydhabo ka dhacay waxay ahayd dulmi lagula kacay Shacabka reer Koonfur Galbeed. Inkastoo deegaanada oo idil la dulmiyey, haddana reer Koonfur Galbeed dulmi iyo duulaan dheeraad ah ayaa ku socda. Afar hogaamiye ayaa sanadkaan gudihiise mid xiray, mid xilka laga tuuray iyo mid la xanibay laga dhigay. Jawaari, Sharif Xasan, Roobow iyo Mursa”.
“Dhinaca Galmudug Xaaf ayaa la isku deyey In xilka laga tuuro, Hoyga Qaybdiid ayaa loo dhacay, anigana waa tii weerar la igu soo qaaday. Somaliland mucaawinada in laga jaro, mashaariicda horumarintana laga hor istaago ayaa la isku dayey”
“Jabuuti geeskaa la geliyey, Puntland waa la fadqalaleeyey oo muran ayaa Madaxweynihii iyo ku xigeenkiisii laga dhex aloosiyey. Jubaland na maleeshiyaad ayaa lagu hubeeyey. Shacabku waa in uu baraarugaa oo Dawladan xasilooni darida caadada ka dhigatay waa in meel looga soo wada jeestaa”